I-One Two Three Electric Co, Ltd.
I-One Two Three Electric Co, Ltd. itholakala e-Yueqing, esifundazweni saseZhejiang, inhlokodolobha yemishini kagesi yaseChina, le nkampani ingumkhiqizi osezingeni eliphezulu onguchwepheshe ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izinto zikagesi ezinamandla kagesi amancane njengecala elibunjiwe lesifunda , Isihlukanisi somoya, ikhefu lesifunda elincane, ikhefu lesekhethi lokuvuza, iswishi yokulawula nokuvikela, iswishi yamandla amabili othomathikhi, iswishi yokuzihlukanisa nokunye. Kuyibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu elihlanganisa i-R & D nokukhiqiza. Ngesitifiketi sezobuchwepheshe obunelungelo lobunikazi, imikhiqizo iqinisekiswa yi-GB, CE, CCC, njll.
Le nkampani ithatha ukuphathwa kwezesayensi njengomongo, ithatha izidingo zomsebenzisi, ikhwalithi yomkhiqizo kanye nensizakalo yokuqikelela njengesikhungo somqondo webhizinisi, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezimakethe ezahlukahlukene nasezindaweni ezahlukahlukene zokufaka izicelo, ukuze kunikezwe ukusebenza okuphezulu futhi
Ukunamathela kunani lokuhlonipha abantu, ukuthuthukisa amandla abantu, nokuphishekela umphefumulo wabantu njengenhloso yomsebenzi, enkampanini yethu, abantu abavamile bazoba ngabantu abahle kakhulu, umfudlana ongaguquguquki wabantu lapha uyafeza amaphupho abo okuphila, bahlakulele ithimba lamathalente lesikhathi eside eliwina ubuholi bezimakethe, sakha izinzuzo zenhlangano, futhi liholele ekuqondisweni kwenani, sinomqondo wokuthunywa futhi Ithimba elibhekene nomthwalo wemfanelo, futhi sisekela ukufezeka kwezinhloso zamasu nokuphishekela ithalente.
Le nkampani inakekela abasebenzi ngezici zempilo, imizwa nokukhula.
Abasebenzi benkampani bayawazisa amaphupho abo angaphakathi kanye nezinto abazenzayo. Ngoba banamaphupho, banomdlandla ngokwengeziwe, banobuciko, futhi banamandla okushayela ukudlula ezinye izinhlangano nabantu ngabanye ukwenza ngcono umbuso wabo.
IQEMBU LOKUQALA NE-R & D
Njengamanje, inkampani ineqembu lobuchwepheshe be-r & d labantu abangaphezu kuka-70, kufaka phakathi onjiniyela abakhulu be-2, onjiniyela bephrojekthi abayi-8, onjiniyela abaphezulu abangu-13, onjiniyela abangu-28 nabanye abasebenzi abangu-29.
Inkampani inamathela emisha yesayensi nezobuchwepheshe, yethula njalo abasebenzi abangochwepheshe, izinikele ekuthuthukiseni imikhiqizo kagesi ephephile, ethembekile, ehlakaniphile, esindisa ugesi kanye nezixazululo zamakhasimende.
Le nkampani inezinhlobonhlobo zokubambisana nezikhungo zesayensi nezobuchwepheshe, amakolishi obuchwepheshe kanye nochwepheshe bezobuchwepheshe, ngokuthuthukiswa kwemikhiqizo emisha njengengqikithi, futhi njalo ikhuthaza inqubekela phambili kwezobuchwepheshe.
UKUTSHALWA KWE-TECHNOLOGY R&D
Eminyakeni edlule, inkampani ibigxile ocwaningweni lobuchwepheshe nasekulawuleni ukuthuthukiswa kwemikhiqizo njengomsebenzi obalulekile. Ngakolunye uhlangothi, ikhuthaza ngamandla ucwaningo oluzimele nentuthuko, ngesisekelo sokulungiswa kwesakhiwo senqubo, ithobela ukuqondiswa kwezimakethe, okugxile ekuzuzeni, kuqinisa ucwaningo oluzimele lomkhiqizo nentuthuko, iqinisa ucwaningo lobuchwepheshe bezicelo, ithuthukisa ngenkuthalo imikhiqizo enenani eliphakeme elengeziwe , okuqukethwe kobuchwepheshe obuphakeme nokuthengiseka, nakokunye.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele sikhulise ngenkuthalo ukubambisana nezikhungo zocwaningo lwesayensi, amakolishi ochwepheshe kanye nochwepheshe bezobuchwepheshe, sinikeze ukudlala okugcwele ezinzuzweni zabo zobuchwepheshe, sifunde emandleni omunye nomunye futhi senzele ubuthakathaka bomunye nomunye, sikhuthaze njalo inqubekela phambili yezobuchwepheshe, sizibophezele ekuthuthukiseni ukuphepha , Imikhiqizo kagesi ethembekile nehlakaniphile nezixazululo zamakhasimende.
Eminyakeni yakamuva, ukuthengisa kokusebenza kwenkampani kugcine ukukhula okusheshayo, ngenkathi kukhulisa inani lokutshalwa kwe-R & D kubuchwepheshe unyaka nonyaka.
ln ukuze kuqinisekiswe izinga lezinto ezisetshenziswayo zebhizinisi, inkampani yethula ngenkuthalo imishini yokukhiqiza yamazwe omhlaba kanye nezimpawu zokuhlola, iqinisa ukuthembeka kocwaningo kanye nokuhlolwa, inkampani manje inezimpawu zokuhamba ezihlakaniphile zombhede wokuhlola, umugqa wokuthola othomathikhi, ukucacisa okuphezulu kokuhlanganisa ithuluzi lokulinganisa, ithuluzi le-microscope yendawo yonke ukukhiqizwa okuthuthukile nemishini yokuhlola. Inkampani inesikhungo esikhulu sokuhlola, ifakwe i-laboratory yemishini yokusebenza kwempahla, i-productcharacteristics laboratory, i-EMC laboratory, i-laboratory ejwayelekile neminye imishini yasekhaya neyasemaphandleni yokuqala kanye nezinsizakusebenza ze-putinto ezisetshenziswayo, zithuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi ukuthuthuka okungaguquki kobuchwepheshe bokukhiqiza nokuphathwa kwekhwalithi.
Sizibophezele ekuhlinzekeni ikhwalithi, imikhiqizo ephephile nezinsizakalo, futhi sihlole ngenkuthalo izidingo ezingaba khona zamakhasimende;
Sikhuthaza abantu abaningi ukuthi babambe iqhaza emisha ngendlela evulekile, bahlanganise ubuchwepheshe obusha namamodeli ebhizinisi amahle kakhulu, futhi bahlale benza izimanga ezijabulisayo.
Sigxilisa ukubaluleka okukhulu kulwazi lwekhasimende nemibono yethu, sithuthukisa njalo uhlelo lokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende, sikhule ndawonye namakhasimende, futhi sibheka le nqubo njengenani lokuzuza ubuhle.